ပန်းပွင့်ဥယျာဉ်တော်ဆီမီးခွက် China Manufacturer
Home > ထုတ်ကုန်များ > ရှုခင်း Lighting စီးရီး > ထိုဥယျာဉ်ကိုမီးအိမ် > ပန်းပွင့်ဥယျာဉ်တော်ဆီမီးခွက်
ဒီဥယျာဉ်ကိုဆီမီးခွက်၏အပြင်ပန်းဒီဇိုင်းကိုအချစ်ဇာတ်လမ်းများနှင့်တက်ကြွသင်္ကေတဖြစ်သော blooming ပန်းပွင့်အားဖြင့်မှုတ်သွင်းထားသည်။ ဝင်းအလင်းအိမ်အဓိကအားဖြင့်လူလှပသောလေးမွတျတနျဖိုးပေးရမသာ, သာယာလှပအစက်အပြောက်နဲ့ high-end လူနေအိမ်အလှဆင်ဖို့အသုံးပြုကြသည်။ ဒါ့အပြင်ညအချိန်တွင်ယက်ပဲလားအလင်းအိမ်ရှိပါတယ်။ အဆိုပါအလင်းအရင်းအမြစ်ကိုပိုပြီးစွမ်းအင်ထိရောက်နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်-ဖော်ရွေ, စိမ်းဘဝကိုပိုမိုနီးကပ်စွာသော LED ဖြစ်ပါတယ်။ ကို C အစဉ်အလာဥယျာဉ်ကိုအလင်းနှင့်အတူ ompared, မော်ဒယ်နှင့် function ကိုအတွက်မီးခွက်နှင့်မီးအိမ်ကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့လမ်းပေါ်မှာဆီမီးခွက်ကိုလည်းဆက်ကပ်အပ်နှံဒီဇိုင်းဌာနကရှိပါတယ်ပါဘူးကတည်းကယေဘုယျအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီမီးခွက်အထူး, ဖောက်သည်ရဲ့လိုအပ်ချက်ကဒီဇိုင်းနေကြတယ်, ကျနော်တို့မှသာလမ်းပေါ်ဆီမီးခွက် shape.Commitment အမျိုးမျိုးဒီဇိုင်းပေါင်းစပ်ဖို့အများကြီးဒီဇိုင်းကို၏ဝိသေသလက္ခဏာများသည်နှင့်အညီဦးမည် မြို့ပြနှင့်ကျေးလက်အလှဆင်, ဒါပေမယ့်လည်းဘဝအလင်းရောင်ညဥ့်ခရီးသွားမှအကြီးမြတ်ဆုံးအကူအညီနဲ့ဆောင်ခဲ့ဦးမည်။ ဥယျာဉ်မီးအိမ်, ဥယျာဉ်မီးအိမ် Post ကို, ဥယျာဉ် Lamps နေရောင်ခြည်, ဥယျာဉ်မီးအိမ် Post ကိုနေရောင်ခြည်, အခင်းအကျင်း Lighting စီးရီး, အခင်းအကျင်း Lighting ပစ္စည်းများ, အခင်းအကျင်း Lighting Led, အခင်းအကျင်း Lighting ဝါယာကြိုး
1. မီးခွက်နှင့်မီးအိမ်၏အမည်: စည်းစိမ်ဥစ္စာဂုဏ်အသရေပန်းများ
2.Light အရင်းအမြစ်: ပါဝါမောင်းနှင်သည့် LED (5630 chip ကို)
4. မီးခွက်နှင့်မီးအိမ်၏အရွယ်အစား: စုစုပေါင်းအမြင့် 3.0m, ပန်းကန်အချင်း: 650MM
5. ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးတန်း: IP65
6.C olor အပူချိန်: 3800K-6000K
7. ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက်: အရည်အသွေးမြင့်လူမီနီယံအလွိုင်းသတ္တုများပုံသွန်း, မျက်နှာပြင် polyester ပလပ်စတစ်အမှုန့် electrostatic ပက်ဖြန်း, Anti-ခရမ်းလွန်ဓါတ်ရောင်ခြည်, သံမဏိ connector ကိုမြင့်မားခွန်အားကို built-in LED အလင်းအရင်းအမြစ် Anti-ချေးနိုင်စွမ်း, မူပိုင်အလင်းလှံတံ,
8. အင်္ဂါရပ်များ: အလှဆင်ဥယျာဉ်ကိုဆီမီးခွက်ပစ္စည်းများ, ဒီဇိုင်းစတိုင်သို့မဟုတ်ရိုးရှင်းတဲ့ဖက်ရှင်, ဒါမှမဟုတ်ဂန္ထဝင်အချစ်ဇာတ်လမ်း, ဒါမှမဟုတ်ဇိမ်ခံ, ဒါမှမဟုတ်လက်ရာမြောက်သောကြော့ရှင်း။ မီးခွက်ကိုယျခန်ဓာ၏ဖြာထွက်အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အပြာအလင်း, အဝါရောင်အလင်း, အနီအလင်း, အဖြူရောင်အလင်း, အစိမ်းအလင်း, ဒါမှမဟုတ် RGB အရောင်ပြောင်းလဲမှုဖြစ်နိုင်ပြီး, ထိုကဲ့သို့သောအလင်းသဲလွန်စ, ရေစီးဆင်းမှုနှင့်အခြားဆိုးကျိုးများအဖြစ်သံကိုထိန်းချုပ်မှုပရိုဂရမ်, သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်
9. သက်ဆိုင်သောသောနေရာများ: ပန်းခြံ, ဝင်းနဲ့ high-end လူနေအိမ်ဧရိယာ, လမ်းနှစ်ဖက်စလုံးက, စီးပွားဖြစ်လူကူးလမ်း, အပန်းဖြေစတုရန်း, သာယာလှပတိုးရစ်ဧရိယာ, etc
60W ~ 210W LED မီးအိမ်ဌာနမှူး အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
White ကသူ Ming Xu နဲ့ LED မီးလုံးမီးအိမ် Holder အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
secondary ရောင်ပြန်ဟပ်ယာဉ်အသွားအလာသင်္ကေတပြ အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
မြင့်မားသောအဆင့်ဥယျာဉ်မီးအိမ် LED ကိုဥယျာဉ်ဆီမီးထွန်း ဥယျာဉ်တော်ဆီမီးထွန်းစနစ် မြင့်မားသောပါဝါလမ်းမကြီးမီးအိမ် ရိုးရှင်းသောခေတ်သစ်ဥယျာဉ်မီးအိမ်